किन अल्मुताइरी प्रेस मिटमा आएनन् ? कतै यो अर्को माइन्ड गेम त होईना ? -
किन अल्मुताइरी प्रेस मिटमा आएनन् ? कतै यो अर्को माइन्ड गेम त होईना ?
नेपालले आफ्नो फुटबल इतिहासमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलमा बुधबार बंगलादेशको सामना गर्दैछ । त्यसमा जित अथवा बराबरीको नतिजामा नेपाल साफ च्याम्पियनसिप २०२१ को फाइनल पुग्नेछ ।
पराजित रहेमा नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ । यसको ठीक अगाडि मंगलबार आयोजित प्रेस मिटमा नेपाली प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी आएनन् ।
किन त ? नेपाली टिमले दिएको जानकारीअनुसार अहिले तत्काल उनी प्रशिक्षणमा ब्यस्त छन् । त्यो भनेको नेपाली टिमले बान्डोस टापुमा दिउँसो अभ्यास गरेको छ । बिहीबार हुने खेल दिउँसो मालेको स्थानीय समयअनुसार ४ बजे हुनेछ र त्यसअनुसार खेलाडीलाई अभ्यस्त राख्न प्रशिक्षण भएको हो ।
तर यो उनको माइन्ड गेम पनि हुन सक्छ र उनी यस्तै यस्तै काम गर्न सिपालु छन् । उनको स्थानमा प्रेस मिटमा सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठ र गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ आए । त्यसमा दुवैले खासै बोलेनन् ।
किरणले भने, ‘हामी बंगलादेशविरुद्ध जित्न नै खेल्नेछौं । खेलको रणनीति बताउने तय गर्ने जिम्मा मुख्य प्रशिक्षकको हो ।’ अनि विशालले भने, टिममा सबै खेलाडी ठीक मानसिकतामा छन् र सबै बंगलादेशविरुद्ध जित निकाल्न चाहन्छन् ।
प्रेस मिनेटमा बंगलादेशका मुख्य प्रशिक्षक ओस्कार ब्रुनोज र कप्तान जमल भुया नै आए, विशेषत: स्पेनी प्रशिक्षकले सटिक बोले । उनले बंगलादेश होइन, नेपाल दबाबमा हुने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘मेरो हिसाबमा सबै दबाब नेपाली टिममै हुनेछ, किनभने नेपाललाई कसरी खेल्ने हो, त्यसमा दुविधा हुन सक्छ । नेपाललाई फाइनल पुग्न जित भए पनि हुन्छ, बराबरी भए पनि हुन्छ, त्यसैले टिमले कसरी खेल्ने हो, त्यसमा अन्योलता हुनेछ । तर हामी स्पष्ट छौं, हामीलाई भोलि स्पष्ट जित आवश्यक छ, त्यसैले हामी सुरुदेखि आक्रामक भएर खेल्नेछौं ।’
धुर्मुस–सुन्तलीका लागि चितवनबाट आयो खुशीको खबर, रेणु दाहालले गरिन यस्तो ठुलो घोषणा
के नेपालले साफ च्याम्पियनसिप उपाधि जित्ला ? नेपाली प्रशिक्षकले खुलाए यस्तो रहस्य
श्रीलंकाका प्रशिक्षकले भने, ‘साफ च्याम्पियनसीपमा नेपाल एकमात्र बलियो टोली’
नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन चिनले चाले यस्तो कदम, अरु पार्टि त’ना’वमा
पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बाबुराम भट्टराईले दिए यस्तो भन्दै कडा चेतावनी, देशैभर हं’गा’मा
दसैँमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिए यस्तो सन्देश, देशैभरि म’च्चि’यो खै’ला’बै’ला
हिजोको तुलनामा फेरी बढयो संक्र’मित, आज को’रोना संक्र’मित र निको कति भए ?